Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop Qaybta 4 | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan sii wadaynaa Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 4-aad), halkaas oo maanta aan ku baran doonno inaan ku barnaamij ka samayno Waxqabad Adobe Photoshop si loo horumariyo a socodka shaqada Dufcaddii oo isku barnaamij ah.
Si aad u awoodo inaad ku shaqeyso koox sawirro ah dufcaddii gudaha PhotoshopKahor, waa inaan horumarinno Waxqabad leh nuqul aan siin doonno sawirka, oo leh dhammaan daaweynta aan dooneyno inaan siino. Aynu bilowno.
Jadwal waxqabad waa Photoshop Way fududahay, si kastaba ha noqotee su'aasha ayaa ka dhalan karta kireysiga: waa maxay Share? ...
Hal Share in Photoshop Waa nooc hore oo amarro qorsheysan ah in lagu fuliyo. Ka soo qaad inaynu u daweyno 150 sawir oo isku mid ah. Hagaag Photoshop Waxaan fursad u leenahay inaan awoodno inaan duubno qadka amarka in la dilo oo aan ku soo celino saxaafadda badhanka, maadaama aan u barnaamij ka dhigan karno in lagu dilo adigoo riixaya furayaasha shaqada.
Sidaan horeyba ugu sharaxnay qaybtii hore, ee Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 3aad), Kahor sameynta Ficil, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado waxa aad rabto in aad sameyso, oo aad si fiican u diyaariso tillaabooyinkii hore, si aan hadhow dhibaato kaaga dhicin. Tan awgeed, waxaan u diyaarinaa, iyo waxyaabo kale, warqad aan ku qorno daaweynta aan ku sameynay sawirka iyo siday u kala horeeyaan.
1 Daaqada ficillada
2 Bilaabida abuurista Ficilka
3 Barnaamijka hore
Si aan u gaadhno daaqadda ficilada waa inaan tagnaa wadada Ficil-daaqadaha, halkaasna marin looga helo. Daaqada ficilku caadi ahaan waxay la xiriirtaa daaqada Taariikhda. Markaan helno, waxaan arki doonaa sida ay u leedahay galka loogu magac daray Ficil ahaan. Gudaha galkaas haddii aan fureyno waxaan ka heli doonnaa dhowr Ficil oo uu ku keenay asal ahaan Photoshop CS6 taasina waxay tusaale u tahay waxa ay Tallaabadu noqon karto. Haddii aan eegno waxaan arki doonnaa saddex-xagal tilmaamaya midigta, oo ku xigta magaca Ficilka, haddii aan riixana waxaan awoodi doonnaa inaan aragno dhammaan amarrada ay Ficilkani fulinayaan si loo gaaro ujeeddadeeda. Agagaarka amarkaas, saddexagal kale ayaa u muuqda in haddii aan riixno, ay noo sheegi doonto qiyamka amarkaas uu ka dhex adeegsado Ficilka fulinaya. Qeybta hoose ee daaqadda Ficillada waxaan ka helnaa dhowr ikhtiyaar, kuwaas oo ah kuwa aan la shaqeyn doonno.
Bilaabida abuurista Ficilka
Qeybta hoose ee daaqada Ficillada, waxaan arki doonaa astaamo dhowr ah oo aan sharxi doono anigoo ka bilaabaya midigta:
Tirtir: Waxaa loo isticmaalaa in lagu tirtiro Ficil ama amar ku dhex jira fal.
Abuur Ficil cusub: Abuur ficil cusub kooxda falalka aad doorato.
Abuur koox cusub: Abuur koox cusub meesha aad dhigayso Waxqabadkaaga.
Xulista Fuli: Wuxuu ciyaaraa ficilka la xushay.
Bilow Duubista: Wuxuu bilaabaa hawsha duubista Fal.
Jooji: Wuxuu joojiyaa duubista ama fulinta fal.
Amaradaan waxaan ku diyaarineynaa waxqabad kaas oo markaa noo ogolaan doona inaan ku fulino dhowr sawir midkiiba. Si aan u helno fursado badan daaqada ficillada, waxaan aadeynaa qeybta kore ee midig ee sanduuqa daaqadaha ficillada waxaanan arki doonnaa astaan waa 3 sadar oo jiif ah iyo saddex xagal hoos u tilmaamaya dhinaca. Waxaan gujineynaa fallaarta oo waxaan kaheleynaa fursado badan daaqada ficillada. Waxaan helnaa ikhtiyaarka koowaad, kan qaabka badhanka, taas oo u adeegta fududeynta habka loo ciyaaro ficilka, daaqadda u rogaya guddi ka mid ah badhannada dhijitaalka ah ee ay tahay inaad gujiso oo keliya si aad u ciyaarto. Waxay sidoo kale leedahay xulashooyin isku mid ah oo aan horay u soo sheegnay iyo qaar kale oo badan oo aan kugula talin lahaa inaad iskaa u baarto, maadaama ay waxtar badan yeelan doonaan markaad sharaxdo nidaamka. Marka dib u eegista la dhammeeyo, waxaan bilaabi doonnaa Tallaabada.
Kahor intaanan bilaabin barnaamijka Waxqabadka, aan diyaarinno warqadda leh amarrada iyo qiyamka aan ku dhejin doonno Tallaabada. Waa inaan ogaanno in amarradan ay noqon doonaan kuwa siiya shaqada oo dhan muuqaalkeedii ugu dambeeyay. Marka aan iyaga go'aansanno oo aan diyaarinno, waxaan billaabaynaa duubitaan.
Si loo bilaabo duubista, marka hore waxaan abuureynaa koox ficil oo cusub, oo aan wici doono Abuurista khadka tooska ah.
Kooxdaas waxqabad dhexdeeda ah waxaan ka abuuri doonnaa Ficil cusub. Waxaan gujineynaa Abuur ficil cusub oo sanduuqa wadahadalka ayaa furi doona halka aan ka dooran karno dhowr ikhtiyaar, oo ay ku jiraan xulashada midab, oo loo isticmaali doono habka badhanka, ama ikhtiyaarka (aad u faa'iido leh) ee ku xirnaanta mid ka mid ah furayaasha waxqabadka ficil , kaas oo aan sidoo kale la jaanqaadi karno iskudhafkiisa Ctrl ama Shift.
Marka aan siino badhanka diiwaanka ee na siiya ikhtiyaarka, waxaan usii amba qaadi doonnaa barnaamijyada anaga oo ku soo qaadanayna amarrada iyo qiimayaasha aan horay u soo tilmaanay, ee u kala horeeya. , taas oo ah, in lagu kaabo barnaamijka 'Action the Intensity command', waa inaan kaliya fulinaa aaladda, innaga oo aan ilaawin ku dhaqanka qiyamka aan dhignay oo si otomaatig ah ayaa loo duubi doonaa. AL final, si ay si sax ah ugu shaqeyso, waxaan dhigi doonaa amarka Keydso sida. Markii aan dhammeyno fulinta dhammaan amarrada, waxaan gujin doonnaa ikhtiyaarka Joojinta waxaanan leenahay ficilkeenna oo duuban oo diyaar u ah in loo isticmaalo markasta oo aan dooneyno.
Qaybta soo socota ee casharka, waxaan ku arki doonnaa qaar ka mid ah xulashooyinka Duubista ee Waxqabadyadu leeyihiin, iyo sidoo kale inaan bilaabi doonno inaan la shaqeyno. shaqo Dufcaddiiba.
Macluumaad dheeraad ah - Cashar barasho: Workflow with Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 3aad)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 4-aad)